HomeTORKIAFaritra Marmara34 IstanbulFepetra fanampiny hanoherana ny lozam-pifamoivoizana IETT
09 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 34 Istanbul, ANKAPOBENY, Highway, Tire Wheel Systems, Headline, Faritra Marmara, Metrobus, TORKIA 0
Misy fepetra fanampiny hanoherana ny lozam-pifamoivoizana
Na eo aza ny fihenan'ny lozam-pifandraisana 2019 amin'ny lozam-pifamoivoizana Metrobus, ny IETT dia nanao fandalinana vaovao momba ny lozam-pifamoivoizana roa farany. Ny Lehiben'ny Birao Mpanadihady no nanendrena manokana hamantatra ireo loza. Ny manam-pahaizana iray dia angatahina avy tao amin'ny Chamber of Mechanical Engineers.
Metrobus, izay manao 7 arivo isan'andro isan'andro amin'ny 220 arivo kilometatra ary mitondra mpandeha 1 tapitrisa, dia manatanteraka asa matanjaka hialana amin'ny loza. Taorian'ny lozam-pifamoivoizana tamin'ny zotra Metrobus tamin'ny Oktobra dia niara-nivory ny 6 sy ny fitantanana 8 IETT. Ny lefitry ny tale jeneralin'ny IETT Hamdi Alper Kolukısa no nitarika ny fihaonana, ny antony nahatonga ny lozam-pifamoivoizana sy ny fepetra noraisina. Niaraka tamin'ny lehiben'ny departemanta, ny tompon'andraikitra rehetra ao amin'ny IETT no nanatrika ny fivoriana.
Ny lefitry ny tale jeneraly Kolukısa dia nilaza fa nanomboka ny fanadihadiana iray mahaliana momba ny loharanom-pifamoivoizana ary ny Lehiben'ny Birao Mpanadihady dia napetraka manokana tamin'ny fanadihadiana ara-panjakana. Kolukısa, ny Chamber of Mechanical Engineers koa dia nangataka manam-pahaizana iray, hoy ihany izy.
Nandritra ny fihaonana dia niresaka ihany koa ireo mpamily sy ny mpamily ny fiara teo aloha. Tao anatin'ity firafitra ity dia nanapa-kevitra ny handinika indray ny fiofanana nomen'ireo mpamily amin'ny fiarakodia ara-pahasalamana sy ny fandraisana ny anjarany amin'ny lozam-pifamoivoizana.
Istanbul Metropolitan Munisipaly, taorian'ny lozam-pifamoivoizana dia nitombo ny fepetra, ny lozam-pifamoivoizana izany mba hisorohana ny "Aingam-piandohana mialoha" dia nanomboka nampidirina.
Vokatry ny fepetra noraisina, araka ny angon-drakitra IETT, dia mihena ihany koa ny isan'ny lozam-pifamoivoizana ao. Ny isan'ny lozam-pifamoivoizana dia toy izao manaraka izao:
Ny fepetra vaovao manohitra ny fahafatesan'ny olona sy ny biby miditra amin'ny lalamby avy amin'ny TCDD. 22 / 03 / 2012 Natao hisorohana ny fahaverezan'ny fiainana indraindray noho ny tariby fiarovana niforona manodidina ny fiaramanidina nomanin'ny TCDD. TCDD 1. Araka ny vaovao voaray avy amin'ireo manampahefana misahana ny lalana ao amin'ny faritra, ny rafitra fantsom-piraketana dia ampiharina manodidina ny rindrina afa-tsy ny fiampitàna ambony. Ankoatra ny fanavaozana ny lalamby sy ny torimaso azo antoka araka ny fenitra iraisam-pirenenan'ny lalamby, ny TCDD dia mandinika ny fiarovana ny tontolo iainana. Amin'io fomba io, dia mikendry ny hisakanana ny fahafatesan'ny olona sy ny biby tsy hiditra amin'ny lalamby indraindray. Ao Edirne, ny laharam-pahamehana dia nomena ny toerana fonenana fonenana dia mbola nesorina. Ny ekipa dia manohy ny ezak'izy ireo hampitombo ny fiarovana ny tontolo iainan'ny lalamby any amin'ireo faritra voatondro.
Ny fihenan'ny alàlan'ny fiaramanidina dia mampihena ny loza 10 / 01 / 2012 Noho ny fepetra noraisina tamin'ny taona 10 farany, dia nihena be ny fiakaran'ny lozam-pifamoivoizana sy ny isan'ny maty ary naratra tamin'ireny loza ireny. Ao anatin'izany dingana izany, ny 78 isan-jaton'ny isan'ny loza amin'ny fiampitàna ambony, 15 isan-jaton'ireo namoy ny ainy ary ny 50 isan-jaton'ireo naratra dia nihena. Araka ny tatitra nataon'ny TCDD ao amin'ny Hem Level Crossing Report kaz, ny lozam-pifamoivoizana amin'ny làlam-be dia mihena be, saingy vokatr'izany dia anisan'ny olana lehibe indrindra amin'ny TCDD izy ireo. Araka ny antontan'isa, ny olona 600 dia maty isan-taona noho ny lozam-pifamoivoizana any Eoropa. Araka ny voalazan'ny Union International of Railways (UIC), 95 dia tompon'andraikitra amin'ny mpampiasa ny lalana. Yüzde
Ny Metrobus dia nijanona teny an-dalana ... Metrobus naka ny fiainana ... Metrobus toy izany, metrobus toy izany, inona ity metrobus ity 30 / 07 / 2012 Metrobus nidina, Metrobus niakatra ... Metrobus dia nijanona teny an-dalana ... Metrobus naka ny fiainana ... Metrobus toy izany, metrobus toy izany ... Inona no atao hoe metrobus asa? Iza no niantso an'io bus ela io? Te hanoratra ny tantaran'ity anarana ity izay efa rentsika izahay tato anatin'ny taona vitsy ... Nieritreritra aho raha te hahafantatra ny tantaran'ny fiantsoana an'ity anarana ity izay tsy misaraka amin'ny fiteny, na dia tsy manampy ny Metrobus aza izy io. *** Nibilaogy tamin'ny anaran'ireo pejy tao amin'ny Facebook ny rakitsary Lemon dia voalaza amin'ny tantara isan-karazany, ny fanorenana dia napetraka ao, Andro tsy iadian-kevitra, Metrobus ... *** Istanbul Metropolitan tanànan'i Istanbul hanamora ny fitaterana, hanomezana olona mora vidy sy tsotra Aiza ny anaran'ny metrobuses mividy azy?
Fihetseham-panoherana ny fako mampihorohoro 26 / 12 / 2012 Ny minisitry ny fadin-tseranana sy ny varotra Hayati Yazici, niomana amin'ny fisorohana ny fanondranana solika ao anaty volavolan-dalàna, dia hofehezina ny paompy miompana amin'ny fanondranana ny toerana iray manontolo, "Ho tapitra ny volavolam-panitsiana amin'ny fampidirana ny lalàna mifehy ny fanondranana solika. , dingana lehibe iray no hatao mba hiarovana ny tontolo iainana sy ny fahasalaman'ny olombelona, ​​"hoy izy. Ny minisitry ny fadin-tseranana sy ny varotra Hayati Yazici, TOBB Social Facilities dia nanao valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety mikasika ny fepetra noraisina ho an'ny fifamoivoizana. Ny Praiminisitra Circular No. 2012 / 19 dia milaza fa ny fandaharana manan-danja dia natao tamin'ny ady amin'ny fanondranana siramamy.
Ny rafitra metrobus any New Delhi dia nitondra ny manan-karena sy ny mahantra 11 / 07 / 2012 Ve ny vahaolana nentina tany Torkia amin'ny fitaterana, na ny fampiharana ny sakeli-dalana eto narrowing ny fifamoivoizana noho ny fihoaran'ny isan'ny indray voafonja, ary koa ireo izay mitaingina ny Metrobus eo ambany fifanakalozan-kevitra dia tsy tena afa-po, koa dia nitarika ny mpianatra tolona ao India. Ny demokrasia malaza indrindra manerantany, ny renivohitr'i India, New Delhi, ny rafitra fitaterana metrobus natao mba hitadiavana vahaolana amin'ny olana momba ny fifamoivoizana, dia nanangona ny mpanankarena sy ny fidiram-bola miditra an-tserasera tamin'ny fampitaovana tsy miankina amin'ny tompon'ny fiara tsy miankina. Ny làlan'ny "Bus Fast Transit" (OHT), izay tena nifanditra hatramin'ny nahavitana azy tao amin'ny 2008, dia lasa seza fitsarana amin'ny fampiharana ireo tompona fiara tsy miankina. Ny tranga voalohany dia manokana ...
Ny fihenan'ny alàlan'ny fiaramanidina dia mampihena ny loza
Ny Metrobus dia nijanona teny an-dalana ... Metrobus naka ny fiainana ... Metrobus toy izany, metrobus toy izany, inona ity metrobus ity
Fihetseham-panoherana ny fako mampihorohoro
Ny rafitra metrobus any New Delhi dia nitondra ny manan-karena sy ny mahantra
BTS, TCDD dia tsy manao ny asa ilaina amin'ny loza
Lalana mitondra fanamafisam-peo mitondra fifamoivoizana manohitra ny lozam-pifamoivoizana ao Tarsus
IETT dia manangana andalana 3 hafa mankany Metrobus
Famaritana metrobus avy amin'ny IETT
Famaritana hike Metrobus avy amin'ny IETT